မြေအောက်မြောင်းထဲတွင် စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ အောက်စီဂျင်ပြတ် သေဆုံး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မြေအောက်မြောင်းထဲတွင် စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ အောက်စီဂျင်ပြတ် သေဆုံး
Posted by နွယ်ပင် on Nov 16, 2010 in Myanma News, News | 17 comments
စည်ပင် ၀န်ထမ်းများ တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် အောက်စီဂျင်ပြတ် သေဆုံးခဲမှု အား “မြန်မြန်တာ သင်္ဂြလ်လိုက် ကွာ” ဟု ပြောသည့် မြို့ တော်ဝန် အား စည်ပင်ဝန်ထမ်းများ မကျေမနပ်ဖြစ်ကြသည် ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာန (ကုက္ကိုင်း ရေပေးဝေရေးဌာနခွဲ )မှ ၀န်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသော ဦးကျော်လင်း ( ၄၄ )နှစ်၊ ဦးစောနိုင် (၃၆)နှစ်၊ ဦးဆန်းလင်း (၃၅)နှစ်၊ ဦးအောင်ရွှေ (၃၂)နှစ် တို့သည် နိုဝင်ဘာ( ၉) ရက်နေ့က လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်နေစဉ် မြေအောက်(၈)ပေ အနက် တွင်ရှိသော ရေဖွင့်ခလုပ်ကို ဆင်းဖွင့်စဉ် တစ်ဦးတက်မလာသဖြင့် နောက်ထပ် တစ်ဦးစီ လိုက်ဆင်းကြရင်း ၄ ဦးစလုံး တပြိုင်နက် သေဆုံးသွားကြပါတယ်။ အဆိပ်ငွေ့မိခြင်း(သို့)အောက်စီဂျင် ပြတ်လပ်ပြီး သေဆုံးကြခြင်းဖြစ်သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ မည်သည့်သတင်းမှ မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး ။
ဒါ့အပြင် ဌာနဆိုင်ရာ အသက်ဆုံးရှုံးမှု လျှော်ကြေးကိုလည်း ပေးလျှော် ခြင်းမရှိသေးသည့် အတွက် တာဝန်ရှိသူ မြို့တော်ဝန် ဦးအောင်သိန်းလင်းအား ကျန်ရစ်သူမိသားစုများအပြင် ဘ၀တူ ၀န်ထမ်းများ ကပါ မကေsမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်လို့ သိရပါတယ်ခ
မှတ်ချက် ။ ။သတင်း…ဒီမိုဝေယံ..။
ကိုယ့်ဝန်ထမ်းကိုတောင် ဟန်ပြလေး မသနားတတ်။
ဟန်ပြလေး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သဂြိုလ်ရအောင်လုပ်မပေးတတ်တဲ့ကောင်။
စိတ်နှလုံးထား ဘယ်လိုရှိမယ်။ အိမ်ပြန်ပြီး ကြိုတင်ခိုးမဲ ယူဖို့လောက်တတ်တဲ့ကောင်။
ဒီသတင်းတွေ ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.. သေသူတွေလည်း ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ။ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး ဂရုဏာ စိတ်လေး နဲနဲ ပိုထားခဲ့ရင် မကျေနပ်မှုတွေ သက်သာ သွားနိင်တာဘဲ။ ဘယ်သူကမှတော့ သေပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ စိတ်တွေ မထားတတ်တော့ အမြင်ကတ်တာတွေ ခံရ မုန်းတီးခံနေရတာ။ စိတ်ထဲက မပါရင်တောင် နှုတ်၏ ဆောင်မခြင်း လုပ်ခဲ့ရင် အနည်းငယ် ပိုဖြေသိမ့်နိုင်မလားဘဲ။
အဆိပ်ငွေ့ကြောင့် ထင်တယ်။ အောက်စီဂျင်ပြတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မြေအောက်တွင်းတွေထဲ ဆင်းရင် အန္တရာယ်ရှိမရှိ ဘယ်လိုစမ်းသပ်ပြီးမှ ဆင်းသင့်တယ်ဆိုတာကို
၀န်ထမ်းတွေကို အခြေခံသိထားသင့်တာလေးတွေသာ ကြိုပြောပြထားကြရင်
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးကြုံဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ ခုတော့ ၄ ယောက်တောင် တယောက်ပြီးတယောက်
လိုက်ဆင်းသွားကြတာ။ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာမသိကြလို့လား။ သတိမထားမိလိုက်ကြလို့လား။
လူ့အသက် ၄ ယောက်တောင်ဆုံးရှူံးသွားတယ်။
အားလုံးကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေ။နောက်ဘ၀တွေမှာ ဒီလိုမျိုး ထပ်မကြုံတွေ့ပါစေနဲ့ ။
အဘိုးကြီးအောင်သိန်းလင်းကတော့ မဲလည်းရပြီးရော လုပ်တော့မယ်ထင်တယ်..ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ စိတ်ဓါတ်တွေပြင်ရမယ်…. အခုထဲံက မပြင်ပဲ စစ်တပ်ပုံစံသွင်းချင်နေတာ .. တော်တော်ဆိုးတဲ့ အဘိုးကြီးဗျာ.. ဒါပေမဲံ့ သဘာဝတရားရှိတယ်.. ဆုတောင်းပေးတယ်ဗျာ အားလုံကောင်းရာသုဂတိရောက်ပါစေ.. နောက်ဘ၀မှာ မကြုံပါစေနဲပေါ့ဗျာ
သေသူများအတွက်တော့ ရင်နင့်စရာကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေ
ဟာဂျီအောင်သိန်းလင်း တရားလွန်လာပီ ဇာတိတွေပြလာပီ စရိုက်တွေပေါ်လာပီ လူတိုင်း လူတိုင်း အရာရာတိုင်းကိုဂရုစိုက်ကြပါဗျာ
ဒါမျိုးတွေက basic safety ပညာပေးတွေ မလုပ်ဆောင်ခဲ့ပဲ အလုပ်ခွင်မှာခိုင်းခဲ့တဲ့ လူတွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒီလို အလုံပိတ် အခန်း (enclosed space) တွေကို ၀င်မယ်ဆိုရင်
မ၀င်မီလုပ်ဆောင်ရမဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ်ထားရမှာပါ။
ဥပမာ သစ်သားသစ်ရွက်တွေဟာ ရေငွေ့နဲ့အတူ oxygen ကိုပါစုပ်ယူတဲ့ သဘာဝရှိတာမို့ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လတ်တာ ဖြစ်နိုင်သလို တစ်ချို့ ဓါတ်ပြုပြီး toxic/dangerous gas တွေထုတ်လွှတ်လို့ ရှူမိပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ သတိမေ့မျောပြီး အချိန်မီ ကယ်မထုတ်နိုင်ခဲ့ရင် အသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်လို့
ခုလို မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အခြေခံအသက်အန်တရာယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အသိပညာတွေ ချို့တဲ့လို့ဖြစ်ရတာဟာ တကယ်တော့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ လုံးဝမဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး။
နိုင်သည်ဖြစ်စေ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ နောက်လူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မှာပါ။
တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်… သေဆုံးသွားကြသူများ ကောင်းရာသုဂတိ လားကြပါစေဗျာ…. နောက်ဘ၀မှာလဲ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့….
အောင်သိန်းလင်းဆိုတဲ့ ငနာလဲသူ့လမ်းသူ သွားရမှာပါ…
Myanmar Man says:
ခွေးမသား . အောင်သိန်းလင်း ( မြိုတော်ဝန် ) .
မင်းသတင်းကြားရတာ . ဘာကောင်းကွက်မှ မရှိပါလား . .မင်းဘာလို လူလာဖြစ်နေတာ လဲ . . နည်း နည်းသတင်းကောင်း လေး ဘာလေး တတ်အောင် လုပ်ဦး ကွ . . ဘယ်လို အရည် အချင်းနဲ့များ ကိုယ် နဲ့မသက်ဆိုင် တဲ့အလုပ်ကို ဦးဆောင်နေလဲ မသိဘူး . . သိပ်ဘ၀င် မမြင့်နဲ့မျောက်ကျ ကျမယ် . .
စိတ် မ ကောင်း လိုက် တာ ဗျာ ……… အဲ လမ်း တစ် ၀က် ခင်း အောင် သိန်း လင်း က တော. .. မင်း သေ ရင် .. မီး ပုံ ထဲ တ ခါ တည်း ထည်. ပစ် မယ် တောက် ….
ချီလီမှာMine လုပ်သားတွေကယ်တယ်ေ၇းမှာသမ္မတလုပ်သူကနေ့ညမအား…အားပေးကူညီ၇မှန်းသိပေမဲ့၊ မြန်မာအစိုး၇ကတော့..တာဝန်၇ှိတယ်လို့တောင်ခံယူချက်မ၇ှိတာအံ့သြလို့မဆုံးဘူး။
သူ့သားအရင်းတွေ ဆိုရင် ဒီလိုပြောမှာ မဟုတ်ဘူးဗျာ..။ ၀န်ထမ်းတွေ သေတာကိုလည်းမသနား၊ စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုလည်း သတင်းစာရှင်းပွဲမှာ ပုဆိုးကို လှန်ပြ တဲ့ အာဏာရှုး လမ်းတစ်ဝက်ခင်း အောင်သိန်းလင်း။ မင့်အလှည့်ကျလာရင်တော့..။
မြေးကလေး သေသွားတာတောင် သိပ်မကြာသေးဘူး သံဝေဂ မရရှာနိုင်သေးဘူးနော်။
စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ comment ၀င်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ကြပါ။ လူအခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဘယ်လောက် ဆုံးရှုံးနေသလဲ။ ဒီကိစ္စကို ILO ကို တိုင်သင့်တယ်။ မြန်မာပြည်က ၀န်ထမ်းတွေ အတော်သနားစရာ ကောင်းတယ်။ လူတယောက်အသက်ကို တန်ဖိုးထားသင့်တယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင် သူတို့ နိုင်ငံသားမပြောနဲ့ သူတို့ဆီမှာ လာလုပ်တဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အသက်၊ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို အလေးထားကြတယ်။ ဒါတွေကို ဒီကောင်တွေ နည်းနည်းလေးမှ မသိတာ အံရောဗျာ။ အေးလေ ဒီကောင်တွေ သိတဲ့ အသိက ခွေးလောက်မှ အဆင့်မရှိကြတာကိုး။ လူကို လူလို့ မမြင်နိုင်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေ။ လူအဆင့် လူ့အသိ လူ့တန်ဖိုးမရှိတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါမျိုး လူ့အခွင့်အရေး၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတာတွေကို အသိပေးဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါမျိုးတွေ နောင်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်သင့်တယ်။ သေသွားတဲ့ လူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရဖို့ အတွက် နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ သူတို့ ရပိုင်ခွင့်ရှိတာတွေကို မသိနိုင်အောင် အားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားတာ၊ ဖုံးအုပ်ထားတာ တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ဒီလို လူ့အသက်တချောင်းကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ ကောင်တွေက ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ် ချမ်းသာကို ကာကွယ်တယ်ဆိုတာ။ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာဘဲ။ ဒီလို လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ကောင်တွေက ခင်ဗျားတို့ အသက်ကို တန်ဖိုးထားမယ်ဆို ခင်ဗျားတို့ထင်ရဲ့လား။ ဒါကြောင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းတွေမှာ သူတို့ လက်နက်တွေအောက်မှာ အသက်စွန့်သွားကြတဲ့ သူတွေက သက်သေပြနေတယ်။
ဒီသတင်းကို တင်ပေးတဲ့သူရော်၊ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ကြတဲ့ လူတွေဟာ နိုင်ငံသားကောင်းတွေလို့ ချီးကျူးရင် ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ သင်မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်နော်။ သင်တာဝန်ဘယ်လောက် ကျေပြီလဲ။ ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ နေရာမှာ သင့်မိသားစုဆိုရင် သင်ဘာလုပ်မလဲ။ ငြိမ်ခံနေမှာလား။